Amin`ny maha zo azy, ny olona voasazy ihany no tsy mahazo mifidy na olona heverina fa tsy manana fahefana ara-tsaina hanao an`izay. Amin`ny maha olom-pirenena feno no hanomezana ny zo ka afaka mifidy malalaka tsara ny olona. Adidy ihany koa satria ny fifidianana filoham-pirenena no fifidianana goavana indrindra ao anatin`ny rafitra demokratika. Antony, ao anatin`ny dimy taona ny filoham-pirenena no hitantana ny firenena. Ao anatin`ny dimy taona ihany koa no tokony hanatanteraka ny programan`asany izay tena antony hifidianana azy. Kandidà 36 no hirotsaka amin`ity fifidianana ity, noho izany, maro ny safidy. Mety hiteraka fahavoazana goavana ihany kosa ho an`izay olona tsy hifidy sy tsy hanatanteraka ilay adidy satria ao anatin`ny dimy taona isika no hiaina ilay vinan`ilay olona nofidian`ny hafa satria ianao tsy nifidy. Noho izany, ilaina ny safidy ary mila tanterahina ny adidy nomen`ny lalàm-panorenana.